Osimiri kacha mma na Cancun | Akụkọ Njem
Maria | | Ike, Ecotourism, Osimiri
Oké osimiri ndị Cancun dabara na nkọwa nke paradaịs: mmiri turquoise, ájá ọcha, na anwụ. Ebe magburu onwe ya na onye ọ bụla ga-achọ ịla n'iyi iji chefuo ụwa. Ezigbo ọlaedo nke Caribbean dị na steeti Quintana Roo nke na-eguzo dị ka ebe kachasị mkpa maka njem nleta na Mexico na otu n'ime ndị America kacha mara amara.
Ọnọdụ ihu igwe ya dị mma, gastronomy ya na ndụ abalị ya na-eme ka Cancun bụrụ obodo na-enweghị atụ iji nwee ezumike kwesịrị ekwesị. Mana osimiri ya bụ nnukwu ebe ndị njem nlegharị anya na ndị na-enye ya aha ya niile. Kedu osimiri kacha mma na Cancun?
Osimiri niile mara mma na Cancun bụ ndị obodo na ndị njem nleta na-emeghe ka ha bụrụ ọha na eze. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ na-echekwa ụfọdụ ohere ka oge ụfọdụ, ịbịaru ụfọdụ akụkụ osimiri pụtara ị gafere ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ n'agbanyeghị na mmadụ ole na ole ga-achọpụta na ị na-eje ije n'akụkụ osimiri.
1 Osimiri Ballenas
2 Osimiri Delfines
3 Osimiri Las Perlas
4 Osimiri Tortugas
5 Osimiri Caracol
6 Osimiri Chac Mool
Ọnụ ụzọ nke Ballenas beach bụ ọha, mana ịchọta ya abụghị ọrụ dị mfe ebe ọ bụ na akara aka dị ụkọ. Chọta ya bụ nnukwu ihe nrite dị ka o nwere echiche dị egwu ma nwee ike ịnwụ na udo. Banyere ime ụlọ ịwụ ahụ, ị ​​ga-akpachara anya ebe ọ bụ na mmiri dị ebe a nwere ike ịdị oke egwu n'oge ọ bụla n'afọ ma nwee ebili mmiri siri ike. Ballenas Beach dị na kilomita 14 na mpaghara ụlọ nkwari akụ n'etiti Punta Nizuc na Punta Cancun.
A maara osimiri a na Cancun dị ka "echiche" maka echiche mara mma nke oké osimiri site na ya. Dị ka nke gara aga, ọ nwere ebili mmiri siri ike ma na-asọsi ike nke na-aghọ aghụghọ, n'ihi ya, a ghaghị iji nlezianya saa ahụ.
N’akụkụ osimiri Delfines enwere oche oche okwute ma tụgharịa uche maka odida obodo yana osisi gazebo, mpaghara ụmụaka, mmiri ozuzo na ime ụlọ ịwụ ahụ, palapas, mgbatị ghe oghe na ụfọdụ akwụkwọ ozi mara mma nke na-ekwu “Cancun” ebe ndị njem nleta na-a queụ mmanya. Foto. Playa Delfines dị na kilomita 18 na mpaghara ụlọ nkwari akụ dị nso na Punta Nizuc na ebe a na-amụ ihe mgbe ochie El Rey.
Osimiri Las Perlas
Las Perlas bụ otu n'ime obere osimiri dị na Cancun ma otu n'ime ndị kachasị nwee ekele karịsịa site na ezinụlọ ebe ọ nwere ebe ụmụaka na-egwuri egwu na mmiri ya dị jụụ. nke mere ka umuaka nwee ike igwu mmiri. Na ngwụsị izu ọ na-ejupụta na ndị mmadụ na-eme picnics n'akụkụ oké osimiri ebe enweghị ịsa ahụ na ụbọchị izu ụka. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ka ị gaa n'akụkụ osimiri n'oge iji nweta ebe kachasị mma na ndò nke osisi.
N'ime ọrụ ndị Las Perlas osimiri nyere bụ mpaghara ụmụaka, ebe a na-adọba ụgbọala n'efu, mmiri ozuzo, mpaghara osimiri, mpaghara palapas na ime ụlọ mposi. Osimiri a dị na kilomita 2 nke Boulevard Kukulcán, na mpaghara nkwari akụ nke Cancun.
Otu n'ime osimiri ndị kachasị ewu ewu ma na-ekwo ekwo na Cancun bụ ụsọ osimiri ọha nke Tortugas, nke na-enye nnukwu ọnọdụ ezumike maka ụbọchị ụsọ mmiri maka ndị njem nleta na ndị ọbịa mba. Na mgbakwunye na ọrụ ndị bụ isi dịka nchekwa ndụ ma ọ bụ ụlọ mposi, ọ nwekwara nri, ụlọ ahịa dị mma na ọrụ aka.
Ebili mmiri ahụ na-adị mgbe niile n'ihi ya ọ zuru oke maka ịme egwuregwu mmiri dị ka igwu mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri. N'elu ala, ị nwere ike igwu volleyball ma si n'elu mmiri kwụsị tupu gị na mmanya na-atọ ụtọ n'ụlọ nri ọ bụla dị na mpaghara ahụ. Echiche sitere na osimiri Tortugas nke ọdọ mmiri Cancun dị ịtụnanya na enwere oche na oche dị iche iche iji mee ka ịnọdụ ala ma nwee mmasị na ọdịdị mara mma.
Playa Tortugas dị kilomita 8 site na etiti obodo ma enwere ike iji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala nkeonwe rute ya nke ọma n'ihi na enwere ebe a na-akwụ ụgwọ.
Foto | Onye nlekọta
N'ịbụ nke dị na kilomita 9 nke Kukulcan boulevard, na mpaghara nkwari akụ nke Cancun, Caracol osimiri nwere ntakịrị ebili mmiri karịa ndị gara aga mana n'akụkụ akụkụ mmiri ị nwere ike ịhụ ala na azụ. N’akụkụ osimiri a ka enwere ụfọdụ ụlọ nri na-eri mmiri ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ nri na-atọ ụtọ na echiche nke osimiri.
Osimiri Chac Mool
Akpọrọ ya aha onye bu pre-Columbian nkume mara ewu ewu na steeti Yucatán na etiti Mexico, nke amaghị ama ihe ọ pụtara. Osimiri Cancun a ma ama n'etiti ndị njem nleta na ndị bi n'obodo maka oke mma ya dịka ọ na-egosi ụdị atụmatụ paradisiacal nke Caribbean.
Dị ka ọ na-eche ihu n'oké osimiri, ọ bụ osimiri nke nwere nnukwu ebili mmiri n'ihi ya, ọ na-ama aka ma na-atọ ụtọ maka ndị kacha nwee obi ike na ndị hụrụ egwuregwu egwuregwu n'anya. Mgbe oke osimiri dị jụụ, ị nwere ike igwu mmiri nwayọ ọ bụ ezie na ị ga-a attentiona ntị na mmiri nke osimiri.
Banyere ọrụ ya, Chac Mool nwere ime ụlọ ịwụ ahụ na mmiri ozuzo, ndị nchekwa ndụ, obere ebe a na-adọba ụgbọala na ụfọdụ palapas. Ọ dị na Km 10 nke mpaghara nkwari akụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Osimiri kacha mma na Cancun